Araka ny nambaran’ny sekretera jeneraliny, Moussa Soalihy, dia fiaingana iny taona lasa iny ary tokony ho efa miditra amin’ny atao hoe fanatanterahana ireo vina amin’izay kosa amin’ity taona ity. Tsy mora ny manao zavatra, hoy ny malagasy. Tsy maintsy mbola misy ny sakantsakana satria izany atao hoe fisandratana na “Emergeance” izany dia toe-tsaina. Ilay vahoaka mihitsy no mila zatra toetsaina mandroso aloha, hoy ny tenany. Mila manaiky fandaminana koa. Ny tombontsoan’ny Malagasy manontolo no tokony hojerena. Tsy manan-jo hanao ny tsy mety intsony ireo mpikamban’ny governemanta ireo ary izaho mihitsy no hangataka ny fialan’izay tsy mahavita azy, hoy hatrany ny tenany. Hevi-diso indraindray ny famaritantsika ny atao hoe tia tanindrazana. Tsy ny fanilihanao vahiny velively no midika fa tia tanindrazana ianao fa ny fahaizanao miara-miasa amin’ny vahiny sady mijery ny tombontsoam-pirenenao. Afaka mijery ny toerana misy an’I Dobay ankehitriny isika, ohatra, fa firenena efa nisy 150 isa no niara-niasa taminy. Tamin’ny andron’ny fanjanahantany, hoy hatrany izy, no nilaina ny fanilihana vahiny.